musha / Interior design / 170㎡ Solo Kumba MuBeijing, A Mechanical Aesthetic Imba YeMota Midhiya Vanhu
2021 / 05 / 30 kupatsanuraInterior design 7491 0
Nabokov, uyo akapedza hupenyu hwake achiongorora muganho wakajairika pakati pesainzi nehunyanzvi, akamboti, "Kusika ndiko kuwanda kwehunyanzvi hwehunyanzvi uye kuda kwesainzi". Kupindirana kwemukati mehunyanzvi midzi uye yehunyanzvi inoonekwa interface inoparadzanisa akasiyana maitiro ehupenyu uye inounza chiitiko chitsva chekugara kwekugara.
Ino ndiyo imba yemunhu mukuru wemotokari midhiya munhu. Imba yeTao iri muLincoln Park, inogara eco-hushamwari muYizhuang, nzvimbo yepakati yeBeijing yepamusoro-chaiyo yekuvandudza indasitiri. Muridzi wemba anoda nzvimbo yekugara iyo yakasununguka uye inofambika, izere nerusununguko uye yekudyidzana kuyedza kuongorora.
Red Hill Dhizaini inokanganisa zvine hungwaru hunyanzvi hwekugadzira neyakajeka hunyanzvi fashoni, vachishandisa dhizaini dhizaini kunyora akasiyana mazwi akakosha muchinangwa chakasiyana-siyana, kugadzirisa nzvimbo yega yega.
Hunhu hwemuridzi uye maitiro ake anozove iwo maronda maratidziro enzvimbo, achizopa iyo isingaperi sosi yehupenyu.
Sachigaro weOksen anopa chirevo chakasiyana uye chine simba, achitonga kwekutanga nzvimbo.
Iyo nzvimbo ine themed neiyo yakasarudzika nhema, chena uye grey color scheme. Nekuyera muyero nenzvimbo pakati pezvitatu, nekubatana kweganda, simbi uye girazi zvinhu, iko iko kweimba kwakatsetseka.
Zvichienderana nehupenyu hwemuridzi uye hunyanzvi, mugadziri akatanga kutora kubva kune yakasarudzika main mamiriro eimba, uye akagadzirisa 170 mita mita yemakamuri matatu yekurara, mbiri-yekugezera furati nenzira "isingaenderane", ichiita kuti ive imwe- yekurara, imwe-yekugezera ine yakavhurika kicheni.
Iyo bhawa, sofa, masherufu uye zvikamu zvinonyatsopatsanura nzvimbo yacho muzvikamu. Nzvimbo dzakasiyana dzinoshanda dzakasununguka kune imwe neimwe, zvakadaro dziine pfungwa yekuyerera kuburikidza nadzo.
Dhizaini dhizaini yekureruka uye yakapusa inoshandura iyo yakachena rational aesthetics uye mararamiro, zvinoenderana nezvinofadza zvevazvino vemaguta epamusoro. Inogona kushandiswa kubata nemutoro webasa pamwe nekunakidzwa nekona yehupenyu.
Iyo yekumisikidza kumadziro ndeyeyeartist Yu Yang. Iye anobvumidza iyo mitsara kuti iwane pfungwa yemimhanzi rhythm mukubatanidzwa kweepisodic uye minimalism. Iye anotirega isu titeerere kune yakanaka kudzokororwazve kwemavara.
Peony, 120cmx120cmx17cm, ingi uye ruvara pabepa, huni, 2018
“Ndinoda kupokana nemitemo yakatarwa uye nzira dzinozivikanwa.
Kugadzirisazve pfungwa dzepakutanga dzevanhu dzekupenda neingi uye
Kuidzosa kubva padanho remweya kune chaiko nzvimbo.
Kubonderana kwehurongwa hwehungwaru uye kugona kwehunyanzvi kunounza kufarira kwakawanda munzvimbo uye kunovaka kurongeka uye kubatana kwechimiro chenguva yekushongedza. Muvara wakanyarara, nguva yekunyaradza inogamuchirwa. Zvinoreva imba zvinowedzeredzwa zvishoma nezvishoma nekubata kwemoyo.
Chiono chinodhonzwa nemablock akarerekera, uye zvinhu zvegirazi zvinogadzira iwo unogoneresa mameseji enzvimbo. Iyo hafu-yakavhurika, hafu-yakavharwa mamiriro ekutungamira imwe nzvimbo nyoro.
Kupinda muimba yekurara, pane nzvimbo yemahofisi epamba kune rimwe divi. Muchiedza chegrey base vara rakagadzirwa naPandomo nedombo, zvishandiso senge simbi, girazi uye reganda zvinopindirana uye zvinowirirana, zvinounza hunyanzvi hwekunaka.
Kune vanhu vemazuva ano, hunhu uye nharaunda zvinogara zvichingoyerera. Mamiriro epamba anodawo pfungwa ye "kuyerera" kuunzira vanhu hupenyu hunonakidza. Iyi pfungwa yekuyerera inoratidzirwa mukutsetseka kwemitsara yenzvimbo uye nekuchinjika kwemabasa ayo.
Iwo machena machafu masherufu anochengetedza pfungwa yekujeka kwenzvimbo uye zvakare inomiririra iyo diki uye isina kuzadzikiswa mamiriro ehupenyu hwemuridzi wemba. Masherufu uye tafura inovhara nzvimbo yehofisi, uye zvakare akapatsanurwa kubva muwadhiropu, achiita basa rekukamura nzvimbo dzinoshanda.
Iyo ergonomic uye yakarongedzwa fenicha zvine hungwaru inosanganisa zvido zvekuchengetedza, hofisi uye varaidzo, uye kugadzirisa zvakare mamwe anoshanda mabhuroko kuti ape zvinorehwa nenzvimbo.
Iyo kongiri block inoita senge backboard yemubhedha, yakaturikwa munzvimbo yekushanda uye yekuzorora. Pasi pezasi rakazara grey toni, inounza isinganzwisisike uye yakapfava shanduko yenzvimbo.
Kuvhenekera kunounza chiitiko chekuzorora chekufungisisa, kuchisimudzira kudzika kwenzvimbo uye nekugadzira yakadzika uye inonakidza nzvimbo yakaturikidzana.
Linear Ink Chinhu ", 120cmx80cm, penda pamupunga wemupunga, tung huni, 2019
Iyo chena nzvimbo iyo mitsara yekuona inopindirana muunganidzwa wekupenda uye dhizaini iyo muridzi wemba akawedzera kuimba yake nyowani. Kona diki yakakomberedzwa nehunyanzvi inzvimbo yekutsigirwa pamweya.
Nekugadzirisa kushandiswa kwenzvimbo, mwenje uye kufefetera kwenzvimbo dzekurara uye dzekushanda, mugadziri akagadzira yakasikwa, inotonhorera uye inoshanduka nharaunda yekugara, ichienzanisa hukama pakati pebasa nehupenyu.
Iyo yekugara nzvimbo ine yakapesana-siyana inoshanda system uye yekuona nhanho. Iyi ipfungwa inotungamira yekurarama munguva yepashure pehosha, tichitarisira kune yakasununguka uye yakaenzana modhorobha yekugara.
Zita rePurojekiti ｜ Lincoln Park Tao Imba
Nzvimbo ｜ Beijing, China
Rudzi rweProjekiti ｜ Zvivakwa
Nzvimbo yePurojekiti ｜ 170㎡
Zuva Rokupedzisa ｜ 2020
Yemukati Dhizaini, Tsvuku Gomo Dhizaini / HONG Dhizaini
Dhizaini Yakagadzirwa ｜ Dang Ming, Li Dandi
Dhizaina Dhizaina Xie Xu, Wang Qing, Ao Qinge, Qu Miao
Project Kufotera ｜ Tan Xiao / Gumi Photography Studio
HONG Dhizaini yekugadzira
Yakagadzwa muna 2002, HONG Designworks inoratidzira-yakawanda dhizaini dhizaini ine maonero epasirese ari kuChina. Yedu sevhisi inovhara hofisi, yekutengesa zvivakwa, mabhizimusi mahotera, kutandara uye kurapwa, veruzhinji tsika nedzimwe mhando dzenzvimbo, ine chaiyo kutonga kuti uwane inoshanda purojekiti kuitisa, nehunyanzvi masevhisi uye ekucheka-kumucheto dhizaini kuratidza epasirese uye akasiyana mabasa anoshanda ne mweya wenguva.
Akadzidza muDüsseldorf, Germany, achidzidziswa neGerman dhizaina tenzi Prof Helfried Hagenberger, uye akadzidzisa paChikoro cheArt uye Dhizaini yeXi'an University yeSainzi neTekinoroji. Akanaka pakusanganisa maonero epasi rese uye ruzivo rwemuno kuumba nzvimbo dzemadhorobha dzinosimudzira pfungwa. Akakokwa senhengo yedare redzimhosva yeAmai Mubairo 2021 muNetherlands, uye akasarudzwa semumwe wevane makumi mana vane mukurumbira vevadiki vane makore ari pasi pe40 muAsia.
Pakapfuura :: Chii chinonzi Liquid Marble? Zvadaro: MUJI Chimiro, Rustic Uye Yakashongedzwa Log Muenzaniso | Jushe United
2021 / 08 / 15 5757
2021 / 08 / 15 6326
2021 / 08 / 15 6112